Nayakhabar.com: पूर्वराजालाई ओलीको जवाफ:घरबार गरेर बस्न दिइन्छ !
पूर्वराजालाई ओलीको जवाफ:घरबार गरेर बस्न दिइन्छ !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘दरबार छाड्नेले घरबार गरेर बस्न पाउने’ जवाफ दिएका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पृथ्वीजयन्तीको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा आफूले दरबार छाडे पनि घरबार नछाडेको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट राप्रपा नेपालले पृथ्वी जयन्तीकै अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञानेन्द्रलाई जवाफ फर्काएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रमा इतिहासमा योगदान गरेका व्यक्तिहरुको सन्दर्भिकता हुँदैन भन्ने नहुने बताए ।
कम्प्युटर र ल्यापटप आयो भन्दैमा हिजो कापी कलमले लेखिएको महाभारत र रामायणको सन्दर्भिकता नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने‘आज हामी जहाँ छौं, त्यो ठीक छ । आजको सन्दर्भ भनेको दरबार छाड्नेले घरबार गरेर बस्न पाएकै छ, पाउँछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रभन्दा राजतन्त्र वा अर्को कुनै व्यवस्था राम्रो नहुनेसमेत बताए । ‘कुनै हिसाबले लोकतन्त्र भन्दा यसको अर्थ यो होइन कि एउटा लोकतन्त्रभन्दा तानाशाही, जहानियाँ, पारिवारिक वा जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको पाखण्डी सिन्द्धान्त छ, यो उपयुक्त पो हो कि भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुहुँदैन ।’
लोकतन्त्र उन्नत परिपाटी भएको व्यवस्था हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने(जनताको शासनभन्दा अरु कसैको शासन उपयुक्त हो कि भन्ने त्यस्तो निष्कर्ष निस्कँदैन ।’
तर, इतिहासका विभिन्न कालखण्डका ठूलठूला योगदान भएको भन्दै पृथ्वीनारायण शाहको योगदानमा भएको एकीकरण अस्वीकृत नहुने प्रधानमन्त्रीले बताए ।
केही सानातिना टकराव हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय एकीकरण नै भएन कि भन्न नहुने बताए । मानिसहरुले नाम थर लेख्दासम्म एकीकरण नै भएन भन्न नहुने भन्दै उनले भने( ‘बहुराष्ट्र हो कि, एकीकृत राष्ट्र होइन कि अथवा राज्यको एकीकरण भयो राज्यको भएन कि भन्ने परिभाषा उपयुक्त हुँदैन ।’
कतिपयले कलिलो राष्ट्र भन्ने गरेको भनेको भन्दै उनले त्यसको खण्डन गरे । नेपाल एउटा राष्ट्र हो भन्दै उनले भने(हाम्रा हिमालहरु कलिला छन्, हिलाल नै हुन्, पहाडहरु कलिला छन्, पहाड नै हुन् । मान्छे जन्मिँदा कलिलै जन्मिन्छ, मान्छे नै हुन् । त्यसैले नेपाल कलिलो राष्ट्र होइन, ऐतिहासिक कालदेखि एउटा राष्ट्र हो ।’